Ankazobe – Midi Madagasikara
Ankazobe : Alika romotra nanaikitra olona efatra
Redaction Midi Madagasikara 6 mars 2014 Alika romotra, Ankazobe, nanaikitra
Nisahotaka ny tao an-toerana omaly vokatry ny fisian’ny alika romotra izay tsy nisalasala nanaikitra olona. Efatra no indray niharan’izany. Nandray fepetra ny tompon’andraikitry ny tanàna ka nanao filazàna mba hanidy ny alikany avy izay manana. Izany dia mba hahitàna mora foana ilay biby nahavanon-doza. Nalefa niakatra aty an-drenivohitra ireo olona voakaikitra ary nentina teny amin’ny…
Redaction Midi Madagasikara 20 février 2014 Ankazobe, FTI, Maevatanana, ONG SAHA, Ravintsara
Seize communes des districts d’Ankazobe et de Maevatanana, regroupées au sein de l’association FTI (Fampandrosoana an’i Tampoketsa Iombonana) sont les bénéficiaires d’un projet dont le volet porteur conjugue le foncier avec la gouvernance locale. C’est une grande porte qui vient de s’ouvrir aux 16 communes réunies au sein de l’Association FTI Ankazobe (Fampandrosoana an’i Tampoketsa…
Redaction Midi Madagasikara 19 février 2014 Ankazobe, First immo, Manankazo, Ocean Trade
2 197 arbustes ont été plantés dans la station forestière de Manankazo, dans la commune d’Ankazobe le week-end dernier. Un reboisement à l’initiative d’Ocean Trade. « C’est une tradition chez nous. C’est notre apport pour la protection de l’environnement. Auparavant, nous avons investi le site d’Ambatomirahavavy mais depuis que Madagasco environnement fait partie du groupe Ocean Trade…